G-talk သုံးရင်းရေနစ်ခဲ့သူ တစ်ဦးအကြောင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Local Guides » G-talk သုံးရင်းရေနစ်ခဲ့သူ တစ်ဦးအကြောင်း
G-talk သုံးရင်းရေနစ်ခဲ့သူ တစ်ဦးအကြောင်း
Posted by zoxnet on Apr 26, 2010 in Local Guides | 27 comments
တစ်နေ့ ကျွန်တော်တို့ ရုံးခန်းကို ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းရဲ့ မိတ်ဆွေ အန်တီတစ်ယောက် ရောက်လာပါတယ်။ သူ့လက်ထဲမှာ စာရွက်စာတမ်း တထပ်ကြီးကိုပါ ကိုင်ထားပါတယ်။ သူ့မျက်နှာကတော့ သိပ်မကောင်းဘူး ခင်ဗျ။
သူက ကျွန်တော်တို့ကို နှုတ်ဆက်စကားပြောပြီး သူ့လက်ထဲက ပါလာတဲ့ စာရွက်တွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းတစ်ခုကို ကျွန်တော်တို့ကို ပြောပြရင်း အကူအညီ တောင်းလာပါတယ်။ သူပြောပြတဲ့ အကြောင်းအရာကို ကျွန်တော်အရင် တင်ပြပါ့မယ်။
အားလုံးသိတဲ့ အတိုင်း ဒီကနေ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ချက်တင် ယဉ်ကျေးမှု တော်တော်ခေတ်စားလာပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက် အမျိုးမျိုးနဲ့ ချက်တင်ကို သုံးစွဲကြပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာမှ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ဟာ အားလုံးနည်းတူ ချက်တင်ကို နေ့စဉ်ဂရုတစိုက် သုံးစွဲပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ချက်ဘောက်စ် သူငယ်ချင်းလစ် ထဲမှာ သူငယ်ချင်းပေါင်း မြောက်မြားစွာကို ထည့်ပြီး စကားပြောလေ့ရှိပါတယ်။ တစ်နေ့မှာ သူဟာ လူတစ်ယောက်နဲ့ ချက်တင်မှာ သူငယ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလူက နယ်သာလန် ကလို့ သူ့ကိုယ်သူ ပြောပါတယ်။ ပထမပိုင်းမှာတော့ အဲဒီမိန်းကလေးကို သမရိုးကျ မိတ်ဆက်ပါတယ်။ သူ့အပေါ်မှာ အထင်ကြီးအောင် စကားလှလှတွေကို ပြောပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ တစ်လနီးပါးကြာလာတဲ့ အချိန်မှာ အဲဒီမိန်ကလေးကို လက်ထပ်ခွင့် ဒါရိုက်တောင်းပါတယ်။ မိန်းကလေးက သူမမှာ ချစ်သူရှိကြောင်း ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလူက သူ့ကိုယူရင် နယ်သာလန်ကို ခေါ်မှာဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံသားလည်း ရမှာဖြစ်ကြောင်း စည်းရုံးပါတယ်။ နောက်ပြီး အဲဒီမိန်းကလေးရဲ့ လက်ရှိချစ်သူကိုလည်း ဖြတ်ဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။ မိန်းကလေးကလည်း ပြောရတော်တော်ခက်ပါတယ်။ အဲဒီလူ တိုက်တွန်းပြီး နောက်နေ့မှာပဲ သူ့ချစ်သူကို ….
အဲဒီမိန်းကလေးက ဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ တဆက်တည်း အဲဒီလူရဲ့ လက်ထပ်ခွင့်တောင်းတာကို လက်ခံလိုက်ပါတယ်။ နယ်သာလန်က တော်တော် ဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်။ အထင်ကြီးစရာ စကားတွေနဲ့ ဆွဲဆောင်ရင်း အဲဒီမိန်းကလေးကို အပျိုဟုတ်မဟုတ် မေးပါတယ်။ ကောင်မလေးကလည်း အပျိုဟုတ်ကြောင်း၊ ကျွန်မတို့ မြန်မာပြည်မှာ စုံတွဲတွေဟာ မင်္ဂလာမဆောင်ခင် ကျူးလွန်လေ့ မရှိကြောင်း ပြန်ရှင်းပြပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ အဲဒီလူက မိန်းကလေးကို ထိုင်းကို လာခဲ့ဖို့ ပြောပြီး သူ့မိတ်ဆွေ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ရဲ့ လိပ်စာနဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို ပေးပါတယ်။ ထိုင်းကို ရောက်ရင် အဲဒီမိတ်ဆွေက လာကြိုပြီး သူ့အိမ်မှာပဲ နေစရိတ်၊ စားစရိတ်ငြိမ်း နေထိုင်နိုင်ကြောင်း ပြောပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာမှ သူက နယ်သာလန်ကို လာဖို့ လေယာဉ်လတ်မှတ်နဲ့ ဗီဇာကြေးပို့ပေးမှာ ဖြစ်ကြောင်း ထပ်ပြောပါတယ်။ အဲဒီ မိန်းကလေးကလည်း အဲဒီလူ ပြောသမျှစကားတွေကို ယုံပြီး ကိုယ့်စရိတ် ကိုယ်စိုက်ထုတ်၊ ထိုင်းကို သွားလိုက်ပါတယ်။ သူသွားလိုက်တဲ့ နေ့က စလို့ အခုတစ်လကျော် ရှိသွားပါပြီ။ အဲဒီမိန်းကလေးရဲ့ သတင်းအစအနမကြားရတော့ပါဘူး။ သူမသွားခင် သူ့မေးလ် အကောင့်ကို သူ့ညီမကို ပေးခဲ့ပါတယ်။ အခုသူ့မေးးလ်ကို ဖွင့်ကြည့်ရင်လည်း အဲဒီလူရဲ့ အကောင့်က မရှိတော့ပါဘူး။ သူတို့လည်း အခုမှ ယူကြုံးမရ ဖြစ်ရပါတယ်။ ဘာမှ လုပ်လို့မရတော့ပါဘူး။
အစမှာ ပြောခဲ့တဲ့ အန်တီကိုင်ထားတဲ့ စာရွက်တွေဆိုတာ အဲဒီမိန်းကလေးနဲ့ နယ်သာလန်က လူ စကားပြောခဲ့တဲ့ Gtalk အစအဆုံး ချက်စာရွက်တွေပါ။ အဲဒီလူ ရေးသားတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ အရေးအသားဟာ မြန်မာနိုင်ငံက မူလတန်းကလေးရဲ့ အရေးအသားလောက်တောင် မရှိပါဘူး။ အဲဒါကိုတောင် အဲဒီမိန်းကလေးက နယ်သာလန် ကလို့ ပြောတာကို ယုံကြည်ခဲ့တယ် ဆိုတာ အံ့သြရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ စုံစမ်းကြည့်ရသလောက် အဲဒီ မိန်းကလေးဟာ ထိုင်းက လူပွဲစားတစ်ယောက်ရဲ့ သွေးဆောင်ရောင်းစားခြင်းကို ခံလိုက်ရတာပါ။ စိတ်မကောင်းစရာပါ။ ကျွန်တော် ဒီပို့စ်ကိုတင်တာဟာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ချက်တင် မမ တွေ စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံး အလည် မလွန်ကြဖို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ လည်လွန်းတဲ့ ဘီးဟာ………………………။
ြုမန်မာ့ ဗီဒီယို တစ်ခုမှာလဲ ဒီလိုမျိုး အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကို ရိုက်ပြထားပါတယ်။ လူကုန်ကူးမှု့တိုက်ဖျက်ရေး ဇာတ်ကားတစ်ခုထဲမှာပါ။ သူ့ကိုလဲ အံ့သြပါတယ်နော် ကိုယ့်စရိတ် ကိုယ်ထုတ်ပြီး အရောင်းစားခံရတယ်လို့။ အပြင်မှာရှိနေတဲ့ လူချင်းတောင် မယုံရတာကိုကွယ် ဘာလို့ အွန်လိုင်းပေါ်က လူကိုယုံရတာလဲနော်။ ပျော့ညံ့တဲ့ စိတ်ကြောင့်လားကွယ်။ ဒါမှ မဟုတ် နိုင်ငံခြားဆိုတာကို အထင်ကြီးနေတာလားကွယ်။ ပညာသင်သွားချင်ရင်လည်းသွားလို့ရတယ်။ ကိုယ်သာ ပညာရပ်တစ်ခုကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တတ်ထားရင်လည်း အလုပ်လုပ်လို့ရတာကိုကွယ်။ မင်းတို့လေးတွေကြောင့်တော့ မြန်မာမလေးတွေကို မထိခိုက်စေချင်ဘူးကွယ်။
ကိုယ်တခါမှ မမြင်ဖူးတဲ့ လူတစ်ယောက်အပေါ် အဲ့လောက်ထိ ယုံကြည်မှုထားတယ်ဆိုကတည်းက ဒီမိန်းကလေးရဲ့ စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုဥာဏ်ကို ခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်…
စိတ်မကောင်းစရာပဲ. .. မဖြစ်သင့်တဲ့ ကိစ္စပဲ။
စိတ်မကောင်းစရာပါပဲဗျာ… စိတ်ကူးယဉ်လွန်သွားတော့လည်း စဉ်းစားချင့်ချိန်ဖို့ သတိမရနိုင်တော့ဘူး ထင်ပါရဲ့
အလိုကြီးရင်အရနည်းတယ်ဆိုတဲ.စကားပုံကို ရှေးလူကြီးတွေက အလကားထားခဲ.တာမဟုတ်ပါဘူး။
လောဘရှိလာတော. မှန်တာမမှန်တာ ဖြစ်နိုင်တာ မဖြစ်နိုင်တာတွေကိုမစဉ်းစားနိုင်တော.ဘူး။
လိမ်သူကိုဘဲ အပြစ်မတင်ပါနဲ.အလိမ်ခံရသူမှာ လဲ မဆင်ခြင်ဘူးဆိုတဲ.အပြစ်ရှိပါတယ်။
10000ကျပ်တန်တဲ.ပစ္စည်းကို 100ကျပ်နဲ.လာရောင်းတာကို ယုံရင်နာပြီသာမှတ်လိုက်တော.နော်။
ကြားရတာစိတ်မချမ်းသာစရာပါပဲနော် ။ ဘယ်လိုမျှော်လင့်ချက်တွေများ မမြင်ရတဲ့လူအပေါ်ထားလိုက်မိပါလိမ့်နော် ။ ရူးရူးမိုက်မိုက်လိုက်သွားရဲတယ် ။ သူသွားမယ်လုပ်တုန်းက ရော အိမ်က ဘယ်သူကမှမသိဘူးလား ။ မိဘတွေက အလိုတူအလိုပါ အသံတိတ်နေခဲ့ကြပြီး အခုလို ဘာသံမှမကြားရတော့မှ ….. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်သမီးကို အဆုံးရှုံးမခံနိုင်ရင်တော့ ပြန်ရှာသင့်တယ် ။
ကဲ … အယုံလွယ်တဲ့ မမတို့ရေ သေချာစဉ်းစားဖို့ကောင်းနေပြီနော် ။
ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ် စိတ်ကူးယဉ်ကြတယ်ဆိုတာမှာ ဒုက္ခကိုသိပ်ပြီးထည့်မတွေးတတ်ကြပါဘူး။ သုခတွေကိုသာ မျက်စိထဲမှာမြင်ပြီး ဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေကိုလည်း ငယ်ရွယ်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့စဉ်းစားမိနိုင်ဖို့အားနည်းတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မိဘတွေအနေနဲ့ဒီလိုနိုင်ငံခြားအထိသွားဖို့ ထိပြင်ဆင်လာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီး ကိုရော သူနဲ့ ပက်သတ်သူကိုပါ ဂဂဏဏ မသိပဲနဲ့ နိုင်ငံရပ်ခြားထိစိတ်ချလက်ချ မလွတ်သင့်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ် ၊တစ်ခုရှိတာက ဒီနေ့ ခေတ်မိဘအုပ်ထိန်းသူတွေ ရဲ့နည်းပညာသစ်တွေနဲ့ ထိတွေ့ နိုင်မှူ ၊အသုံးချတတ်မှူ ဒါတွေလည်း အားကောင်းဖို့ လိုပါတယ်။ အခုခေတ် အချို့ မိဘအုပ်ထိန်းသူတွေထဲမှာ chatting လိုgtalk လို instant messaging ဆိုတဲ့ မြန်မာပြည်မှာအထူးေ၇ပန်းစားနေတဲ့ ခေတ်ပေါ် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ ကို သိသူအတော်နည်းပါတယ်။ ကြားဖူးရင်တောင် ကောင်းကျိူးဆိုးပစ်ကို သိနားလည်သူအတော် နည်းပါတယ်၊ မိခင်တစ်ယောက်ဆိုရင် သမီးလုပ်တဲ့သူက gtalk ကနေ နိုင်ငံခြားကလူ နဲ့ အီနေတာကိုတောင်ဂုဏ်လုပ်ပြီး လူကြားမှာ သမီးကွန်ပျူတာ ကျွမ်းကျင်တာလို့ အပာုတ်မှတ်ကြွားဝါနေတာကို ကိုယ်တိုင်ကြားဖူးပါတယ်၊
အခုကိစ္စမှာလည်း အမှန်တကယ်ဖြစ်ခဲ့ တာဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ် ၊ ဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်မယ်၊ဒါပေမယ့် ပာုတ်တယ်မပာုတ်ဘူးဆိုတာထက် ဒီနေ့ ခေတ်မိန်းကလေးငယ်တွေနဲ့ မိဘအုပ်ထိန်းသူတွေကြားမှာ ရှိနေတဲ့ နည်းပညာကွာပာမှူ ကို တတ်နိုင်သမျှ နည်းပါးအောင်လုပ်ဖို့ ဆိုတာကတော့အမှန်တကယ် လိုနေပြီလို့ သုံးသပ်မိပါတယ်
အင်းအခုခောတ်ကောင်မလေးတွေကgtalk ကိုစွဲစွဲလန်းလန်းသုံးပြီးတော့ ယုံလွယ်တာကိုး။ တက္ကသိုလ်တွေမှာတောင်ကျောင်းသားနဲ့ကျောင်းသူနဲ့ တောင်လူချင်းမတွေ့ရဘဲကျူနေကြတယ်ဆိုတော့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီကိစ္စဟာ။
ဒါမျိုးတွေက လောဘကြီးသူ ချမ်းသာချင်သူ တဏာ ရာဂ ကြီးတဲ့သူတွေအတွက် ယုံတတ် ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။
ဖြစ်ရောဖြစ်နိုင်ပါ့မလား လို့စဉ်းစားမိတယ်။ ဒါတွေက စိတ်အရမ်းမွန်းကျပ်ပြီးထွက်ပေါ်က်ရှာတဲ့အခါမှာ မစဉ်းစာမိမျိုးလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်ထင်တာပဲ။ သနားတော့သနားပါတယ်။
g-talk နဲ့မဆိုင်ပါဘူး သူငယ်ချင်းတို့ရေ….ဒါကို သေချာမြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင် သူ့ရဲ့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်နိုင်မှုဥာဏ်ရည်နိမ့်ကျခဲ့လို့သာ ဖြစ်ရတာဖြစ်ပါတယ်….
သူ့ဦးနှောက်နဲ့ g-talk မသုံးလဲ တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်း ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်
အားလုံးသောသူငယ်ချင်းများ ဘေးဒုက္ခကင်းဝေးကြပါစေ ဆုတောင်းရင်း….
ဟုတ်တယ် ဒီကိစ္စက ချက်တင်ထိုင်တာနဲ့မဆိုင်ဘူး …….. အလိမ်ခံရတယ်ဆိုတာ လောဘကြီးလို့ အယုံလွယ်လို့ အလိမ်ခံရတာ ….. ဘယ်နှဲ့ အပြင်မှာမြင်နေရတဲ့လူတောင်မယုံရတာကို တစ်ခါမှမမြင်ဖူးတဲ့ အွန်လိုင်းကလူကိုယုံရတယ်လို့ … အားလုံးကိုပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးနော် တစ်ချို့ယုံရတာတွေလည်းရှိတက်ပါတယ် …. ပြောချင်တာတစ်ခုပဲ …. “နည်းတောင်နည်းသေးတယ် ” ကျွန်တော့်ကိုဘယ်လိုထင်ထင် “နည်းတောင်နည်းသေးတယ် ” ……..
သနားပဲသနားရမလား.. အ, လွန်းတယ်ပဲပြောရမလား…
မဖြစ်သင့်တာတော့. .တော်တော့်ကိုမဖြစ်သင့်တဲ့ ကိစ္စမျိုးပါ
ငယ်ရွယ်မှုရယ် ၊ အချစ်ဆိုတဲ့ စိတ်ရယ် ၊ စွန့်စားလိုမှုတွေ ရယ် ပေါင်းစပ်ပြီး မိုက်ရူးရဲဆန်ဆန် လုပ်ဆောင်
တတ်ကြတဲ့ အရွယ် တွေက ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးပါပဲ ။
စဉ်းစားဆင်ခြင်ဥာဏ် အားနည်းခြင်း ၊ နိုင်ငံခြားသားဆိုပြီး ကိုယ့်ဘ၀ကို မြှင့်တင်ပေးမည့်သူအဖြစ်ကြီးမားစွာ မျှော်လင့်ခြင်း ၊ ယုံလွယ်ခြင်း တို့ဟာ အားနည်းချက်တွေလို့မြင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကို အလကားနေရင်း ထောက်ပံ့ပေးမဲ့သူ ဆိုတာ ရှားမယ်ထင်ပါတယ်။ အလကားရပြီဆို နာပြီသာမှတ်ပေတော့လို့..။
We are looking for an “oulet”. Because we are enclosing inatrap.
ဒီလိုဇာတ်လမ်းကတော့ ချက်တင်စခေတ်စားချိန်ကဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ ဒီမိန်းကလေးက ဦးနှောက်မရှိတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ ခုခေတ်မိန်းကလေးအတော်များများက မျက်စိဖွင့်နားဖွင့်အခြေအနေမှာ ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ အပြင်ဗဟုသုတတွေဘာတွေမရှိတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သူများနိုင်ငံသားမပြောနဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေတောင် လိမ်တဲ့သူတွေအမျိုးမျိုး ပေါ်ပေါက်နေတာပဲဟာ။ ဒီတော့ ဦးနှောက်နဲ့မစဉ်းစားမဆင်ခြင်ပဲ ဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတော့ ပြောရရင်တော့ မကောင်းတော့ပါဘူးရှင်။ ဒါတွေကလည်း ခုခေတ်မိန်းကလေးတွေအတွက် အချိန်ပေးချက်တင်ကိစ္စတွေလည်း သိပ်မပြောချင်တော့ပါဘူး။ ဘယ်လိုပဲ ဘယ်သူတွေက သတိပေးပေး သူတို့ကိုယ်တိုင်က ယုံလွယ်နေကြတော့လည်း လုပ်စားတဲ့သူတွေအတွက် ခွင်ဖြစ်သွားတာပေါ့ရှင်။
အဲဒီပုံစံတူနောက်တစ်ခု မေးလ်တစ်ခုမှာဖတ်ရတယ်ဗျ တော်တော်လေးကို စိတ်မကောင်းဘူးဗျာနော် အဲဒီမိန်းကလေးက အယုံလွယ်တာကိုး